အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာ ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ် > အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာပညာ > အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာ ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ
View Full Version : အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာ ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ
ဖိုင်ဆိုက်7MB သာသာလောက်သာရှိပါတယ် ..
အထဲမှာ circuit maker နဲ့ traxmaker ကရက် နှစ်ခုလုံးပါပါတယ် ။
စကားဝှက် - MEF
Link Updated : May.20.2014
100 MB ဆီပိုင်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ ..
အင်စတောနည်းက အရင်ဆုံး setup file ကိုရမ်းရင် သူက စီရီယယ်တောင်းပါလိမ့်မယ် ..
အဲ့ဒါကို ကရက်ဖိုဒါထဲမှာ စီရီရယ်ထည့်ပေးထားပါတယ် .. အဲ့ဒါကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ ။
အင်စတောပြီးရင် သူက လိုင်စင်ဖိုင်တောင်းပါမယ် .. exit ပေးထားပြီး ကရက်ဖိုဒါထဲက ကီးဂျန်းကို ရမ်းပါ ။
ပြီးပါက အဲ့ဒီကရက်ဖိုဒါထဲကပဲ လိုင်စင်ဖိုင် ၃ ဖိုင်ကို C:\_Program Files\_National Instruments\_Shared\_License Manager\_Licenses ထည့်ကို overwrite လုပ်လိုက်ပါ ။
ဒါဆို အိုကေပါပြီး ။
Link Updated : May.22.2014
Cadence ဆိုတဲ့ software လဲ တော်တော် ကောင်းပါတယ်။ ဈေးကြီးတယ်။
PSpice OrCAD က တော့ လူတွေပို သိမယ် ထင်တယ်။
Circuit simulations တွေ လုပ် ရင် devices တွေ ရဲ့model samples တွေ ကို download လုပ် ပြီး OrCAD က simulation မှာ သုံး လို့ရ တယ်။
Multisim လို မျိုး ပါ ဘဲ။
စိတ်ဝင်စားရင် ကျွန်တော်ဆီမှာ cadence IC6နဲ့mmsim6ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း စသင်ခါစဘဲရှိပါသေးတယ်။ ကောင်းကောင်းမသုံးတက်သေးပါဘူး။ သူမှာ design kit နဲ့ ပတ်သက်ပြီး technology ကွဲပြားနေတာတွေ အများအပြားလည်း
ရှိပါသေးတယ်။ သူက window ကို support မလုပ်တဲ့ အတွက်တော့ ပြဿနာရှိနေတာပါ။ လက်ရှိတော့ ကျွန်တော် Centos5မှာ တင်ထားပြ၊ီး စသုံးနေပါတယ်။ Linux နဲ့ အတွေ့ အကြုံ မရှိသေးလို့ ပြဿနာတွေက တန်းစီနေပါတယ်။သုံးနေတဲ့
သူတွေ ရှိရင် ဒီဖိုရမ်မှာ အနည်းငယ် ၀င်ဆွေးနွေးစေလိုပါတယ်။ ckt design အတွက် တော်တော်ကို ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ ရပါတယ်။ OrCAD မှာရှိတဲ့ limitation တွေထက် ပိုနည်းတယ်လို့ ဆရာကတော့ ပြောဖူးပါတယ်။ကျွန်တော်လည်း အဲ
လောက်တော့ နားမလည်ပါဘူး။ အခု ckt design ကို လုပ်ရာမှာ သုံးနေတဲ့ ပစ္စည်း model တွေနဲ့သုံးနေတဲ့ software တွေရဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်လက်တွေ့ မှာ error အနည်းဆုံးဖြစ်ဖို့ က ပြဿနာပါ။ simulation လုပ်ရမှာ ရတဲ့ 
RESULT နဲ့တကယ်လုပ်တဲ့ အခါမှာ ရလာမဲ့ RESULT က အရမ်းကွာနေရင် အဲဒီ model နဲ့ software က အကျိုးမဖြစ်ပါဘူး။ စိတ်ဝင်စားရင် ကျွန်တော် အဲဒီ ၂ ခုလုံးကို တင်ပေးပါ့ မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ :)
ကျွန်တော် ဆီမှာ တော့ cadence ic မ ရှိ ပါ ဘူး။ ဟိုး အရင်တုန်းကတော့ သုံးဖူး လေ့လာဖူး ပါတယ်။ အခုတော့ မသုံးတာကြာလို့မေ့သလောက် ရှိနေပါပြီ။
ကျွန်တော် သုံးဖူးတာ က online server version ပါ။ ဟုတ်တယ် ko htetlinnaung ပြောသလိုဘဲ cadence က Linux environment မှာ run ရ တာ။
မ လွယ် ဘူး။ အဲ့ဒီတော့ ကျွန်တော်က Hummingbird Exceed X Windows ဆိုတာ ကို download လုပ်ပြီး အဲ့ဒီ X Windows ထဲကမှ cadence ကို run တယ်။
အဲ့ဒီ X Windows ထဲက ဆိုရင် windows xp အောက်မှာ run လို့ ရတယ်။ standalone version ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီလို လုပ်လို့ရ/မရ မသိဘူး။
ကျွန်တော့မှာ ရှိတဲ့ tutorials တွေ ကို upload လုပ် ထားပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေက အခြေခံတွေ ဆိုတော့ သိပ်တော့ အသုံးဝင် မယ် မထင်ဘူး။
ွGoogle လုပ် ရင် တော့ ပိုကောင်းတဲ့ tutorials တွေ ရ နိုင် မှာ ပါ။
မှတ်မိသလောက် တော့ attached 12-bit adder က 90nm cmos technology ကိုသုံးထားတာပါ။ full bit mirror adders တွေပါ။
classdaudio amplifier မှာ သုံးထား တဲ့ transistor and inductor models တွေကတော့ coilcraft.com တို့irf.com တို့က models တွေ ကို download လုပ်ပြီး သုံးထားတာပါ။
examples တွေ အ နေ နဲ့ထည့် ပေး ထားတာပါ။
OrCAD ကိုနဲနဲသုံးဖူတယ်.. အခု ကျွန်တော်အရင်သုံးနေတဲ့ဆော့ဝဲကို အင်စတော ပြန်လုပ်တာ ခရက်ဖိုင်ပျောက်နေလို့..
ခရက်ဖိုင်လေးပဲ ခွဲတင်ပေးလို့ ရမလား..
Keil MicroVision ver4(uV4) or Higher full vision လေးများရှိရင် share ပေးပါ ခင်ဗျား..
ဟုတ်မလားတော့မသိဘူး ။ ရှာလို့ တွေ့တာလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
circuit topology တွေဆွဲရင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ၊ circuit design ဆွဲရင်လဲ သုံးပါတယ်။
Electronic Workbench Multism 10.10 ကိူ ifile it နဲ့ download လူပ်တ၁ part7မှ၁ no such file ပြေ၁နေလိူ့ ကူညီကြပါအုံးဗျ၁
ကျနော်အပိုင်း ၇ ကို ပြန်တင်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ ။ အဆင်မပြေရင် ပြန်ပြောပါဦး ။
နောက်ထပ်လဲ mediafire တို့ကနေ ထပ်တင်ပေးပါဦးမယ် ။
PSIM 9.0 Software Full Version လိုချင်ပါတယ်။ တင်ပေးကြပါလား။ Demo Version တော့ ရထားတယ်။ ... ဒါပေမယ့် Simulation အားလုံးကို RUN လို့မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ... Full Version ရမှ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးပါ။
အကိုရေ ရှာတွေ့တာလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်.....ဖူးလားမဖူးလားတော့မသိဘူး သူများဖိုရမ်ထဲ က နေသွားဆွဲလာတာ..
4share(32 bits) (http://www.4shared.com/get/F2TInJ0T/PSIM_Professional_Version_9034.html)
4share (64 bits) (http://www.4shared.com/file/00kiD69H/PSIM_Professional_Version_9034.html)
uploading site မှာ အကောင့်ရှိတဲ့အကိုများ ဖိုင်ကိုတစ်ချက်လောက် သိမ်းထားပေးကြပါလား ခင်ဗျာ..
သူများဆီက ယူထားတော့ လင့်သေသွားနိုင်လို့ပါ..
ကျနော့်အကောင့် 4shared လင့်လေးတွေနဲ့ ပြန်အစားထိုးပေးထားပါတယ်။
ပတ်စ်ဝက်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း အမ်အီးအက်ဖ် အကြီးသုံးလုံး ဆက်တိုက်ရေးရမှာပါ။
4shared လင့်ထပ်ဖြည့်ပေးခြင်း။ 11.10.2010 chit tee
ကိုသိုး ရေ .....
megaupload လင့်ကရော သတ်သတ် ဒေါင်းလုပ်ချပြီး လင့်ပြောင်းပေးထားရမှာ ဘဲလား မသိဘူး။
4shared link နဲ့ ပြန်ပြောင်းပြီးရင် ပြန်တင်ပေးလိုက်မယ်။
ALL Modules are available
PSIM covers circuit level and system level simulation.
PSIM can be purchased by professional organisations only.
PSIM Main Benefits:
PSIM isasimulation package specifically designed for power electronics and motor control.Thanks to PSIM, companies gain in competitiveness as our powerful simulation environment allows them to work more effectively and productively, reduce the development cost and time-to-market. With its user-friendly interface, its simulation speed, its capability of simulating any type of power converters and control circuits, PSIM is ideal for system-level simulation, control loop design, and motor drive system studies.
Double click &quot;PSIM903_Registered.reg&quot; to register your copy!
All examples have been fully tested and simulate as expected
Schematic password for v9 = psim2009MA1
မူလပို့စ်ဖြစ်တဲ့ ဒီနေရာလေးမှာ (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,5013.msg66213.html#msg66213) ကျနော့်အကောင့် 4shared လင့်တွေထပ်ထည့်ပေးထားပါတယ်။
Zaw Lin Tun Tun
Electronics Workbench Multisim 10.0 ကို download လုပ်လို့မရဘူး.....http://www.mediafire.com/error.php?errno=320 ဆိုပြီး Error ဖြစ်နေတယ်....အဲဒီ software ကိုအရမ်းလိုချင်လို့ပါ၊ ကူညီပါဦးနော်။ ကျေှးဇူးပါ။
ဖိုရမ် မင်ဘာများ ခင်ဗျာ၊၊
Protel 99SE software full version ရှိကြရင် share ပေးကြပါဦး။
PCB design လုပ်တဲ့ software ပါ။
Switch-mode Transformer Design Software လေးများသိရင် လမ်းညွှန်ပေးကြပါအုန်းဗျာ။
C programming compiler software လေးလိုချင်လို့ပါဗျာ...ကုညီပါဦးဗျာ...ကျွန်တော်ရှာတာ အဆင်မပြေပါဘူးဗျာ..ရတော့လဲ licence key တောင်းနေတာနဲ့..အရမ်းသဘောကောင်းပြီး ခပ်သန့်သန့်ရုပ်ရည်ပိုင်ရှင်မျိုးတွေက အမြန်ဆုံး share ပေးမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာ
အီလက်ထရောနစ်သမားများ သိကြတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်တစ်ခုပါ။
Password - MEF
ဒေါင်းလို့ရသွားပါပြီ။ တကယ်လိုအပ်နေချိန် ရှာဖွေဖြည့်ဆီးပေးတဲ့ ကိုဖိုးလပြည့်နဲ့ MEF ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်လို့ ပြောပါရစေ။
ကျနော် မူရင်းလင့်မှာ အသစ်ပြန်တင်ပေးထားပါတယ်။
Multisim 10 နဲ့ 11 (ဖြစ်နိုင်လျှင် 12 အထိ) အတွက် ကီးဂျန်းအပိုင်းသက်သက်ကို အဆင်ပြေတဲ့အခါမှာ mediafire မှတဆင့် ပြန်တင်ပေးစေလိုပါတယ်။